Daraasaad Laga Sameeyay Khilaafka u Dhexeeya Canfarta iyo Soomaalida oo soo bandhigay | Hargeysa World~Herald
Daraasaad Laga Sameeyay Khilaafka u Dhexeeya Canfarta iyo Soomaalida oo soo bandhigay
UncategorizedDaraasaad Laga Sameeyay Khilaafka u Dhexeeya Canfarta iyo Soomaalida oo soo bandhigay
Daraasaad laga sameeyay khilaafka u dhexeeya Canfarta iyo Soomaalida oo lagu soo bandhigay Jig-jiga.
Waxaa maanta lagu qabtay magaalada Jig-jiga kulan lagu soo bandhigayay daraasaad lagu sameeyay khilaafka u dhaxeeya Canfarta iyo Soomaalida, waxaana ka soo qeyb-galay madaxweynaha Jaamacada Jig-jiga iyo xubno ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweynaha Jaamacada Jig-jiga, dr. Bashiir C/laahi oo kulanka furay ayaa sheegay in ujeeddada kulanka loo qabtay ay tahay sidii loo soo bandhigi lahaa daraasaad lagu sameeyay khilaafka u dhexeeya labada qoomiyadood ee Canfarta iyo Soomaalida, kaas oo ay samaysay Jaamacadda Jig-jiga, waana wajigii koowaad ee doodda daraasaadka.
Dr. Bashiir waxa uu sida oo kale sheegay in uu jiri doono kulan kale oo kan la mid ah oo laga soo qeyb-galinayo ugaasyada iyo odayaasha dhaqanka si loogu bandhigo daraasaadka. waxaana la filayaa in labada Jaamacadood ee Jig-jiga iyo Samara ay si wadajir ah u qabtaan kulan xal loogu raadinayo arrintaa dhibaatooyinka badan ka dhasheen.